Nin ka aargoostay Yaxaas - BBC Somali
Nin ka aargoostay Yaxaas
Lahaanshaha sawirka MOSES BIKALA
Afar bilood ka hor, Demeteriya Nabire waxaa dilay yaxaas markii ay aaday haro u dhaweyd gurigeeda si ay biyo uga soo dhaansato. Xayawaankii ayaa dib meesha ugu soo labatay wuxuu la kulmay seyga Nabire oo sugaya, diyaarna u ah aargoosi.
Demeteriya Nabire waxay agjootay biyaha iyada iyo koox haween ah oo ay isku tuulo ahaayeen si ay biyo uga dhaansadaan harada Kyoga ee Uganda, markii uu yaxaas jiitay qaaday, dibna looma arag.
Seyga Nabire, Mubarak Batambuza, oo naxdin darteed tabartii ka tagtay ayey masiibo u aheyd in xaaskiisa iyo uurkii ay siday oo aan dhalan uu waayo.
Bishii hore ayuu maqlay in yaxaaskii xaaskiisa qaaday soo noqday.
"Qof ayaa isoo wacay oo igu yiri, 'Mubarak, war ayaan kuu hayaa, yaxaaskii marwadaadi qaaday ayaa halkan joogo, hadda ayaan fiirineynaa".
Mubarak oo 50 jir kaluumeysata ah ayaa soo aaday harada iyadoo ay la socdaan saaxiibadiis. "Bahal weyn ayuu ahaa, waxaan isku daynay inaan kula dagaalano dhagxaan iyo ulo balse waxba kama qaban karin", ayuu yiri.
Mubarak Batamuze wuxuu aaday birtumayaasha isagoo u sheegay inuu doonayo waran uu kula dagaalamo dugaag xaaskiisa qaatay, kana aargoosto.
Birtumayaasha shan doolar ayey ugu sameeyeen waranka oo ku adkeyd Batamuze, hadana wuu go'aansday dilka bahalka qaaday xaaskiisa. Wuxuuna aaday biyaha yaxaaska ku jiray.
Saaxiibada Batambuze aad ayey u baqeen waxayna ku yiraahdeen. "Fadlan iska daa, wuu weyn yahay wuu ku cunaa, waran kuma filna".
Batambuze oo ku adkeystay go'aankiisa ayaa ku guuldareystay markii ugu horeysay inuu dilo.
Madaxa duurjoogta Uganda, Oswald Tumanya, ayaa sheegay in yaxaaska oo culeyskiisu ahaa 600 oo kiilo, dhererkiisu ka dheeraa afar miter.
"Waranka ayaan dhinac ka geliyay iyadoo saaxiibadey ay igu caawinayaan inay dhagxaan ku tuuraan, wuxuuna bilaabay inuu afka igu weeraro".
"Wuxuu bilaabay dagaal ka dhigay goobta cabsi, aniga kama cabsan dhimasho maadama aan go'aansaday, inuu dhinto oo kaliya ayaan doonayay". "Wuxuu nagu qaatay saacad iyo bar aniga iyo saaxiibadey".
Yaxaaska ayaa loo qaaday jaamacadda, Makarere ee Kampala, halkaasi uu ku eegay dhakhtarka xoolaha. Waxaa laga helay laf bani'aadam caloosha yaxaaska inkastoo la ogeyn qofka uu ahaa.
Batambuze ayaa caan ka noqday tuuladiisa iyadoo dadka deegaan ay uga mahadnaqayaan duguugii uu dilay, wuxuuna yiri inuu yahay geesiga dhulkiisa.